Mpiambina iray ao amin’ny sampandraharahan’ny Asa Vaventy sy mpanamboatra fiara roa no nosamborin’ny mpitandro filaminana tamin’ny alakamisy 7 avrily teo tany Ambatolampy, faritra Vakinan-karatra. Halatra fiara Mazda nitranga tany Andranolahitsy, Ambohitrimanjaka, ny 29 janoary 2011 lasa teo, no antony nisamborana azy ireo.
Lehilahy iray, tamina halatra môtô, ary efa naiditra am-ponja teny Antanimora no niaiky ny nanafenany ity kodia-droa misy môtera ity tany Ambatolampy. Saron tany ihany koa avy eo ilay fiara Mazda nisy nagalatra tany Andranomahitsy, ka niafara tamin’ny fisamboranan ireo telo lahy nosamborina ireo.
Hatolotra ny Fampanoavana anio alatsinainy izy efa-dahy ireo, hahazoana manao fanadihadiana lalindalina kokoa. Isan’ny halatra niroborobo sy nahazo vahana teto amintsika ity resaka faira Mazda ity. Ho an’ity sarona tany Ambatolampy ity dia efa voaloko sy novaina ny kojakoja tamin’ny fiara. Ahiana ho tambazotra amin’ny halatra môtô ihany koa anefa ity tratra tany an-toerana ity.